Shiinaha HDPE soosaarayaasha line extrusion iyo shirkado | FAYGO
Soo-saaraha xariiqa tuubbada HDPE wuxuu qaataa faashad wax ku ool ah & foosto, gearboxku wuxuu sii xoojinayaa ilkaha gearbox oo leh nidaam is-saliidayn. Matoorku wuxuu qaataa matoorka caadiga ah ee Siemens iyo xawaaraha ay maamusho inverter ABB. Nidaamka xakamaynta wuxuu korsadaa Siemens PLC xakameynta ama xakameynta badhanka.
Khadkan biibiile ee PE wuxuu ka kooban yahay: xeedho walxaha + SJ90 Fududeeyaha kaliya ee furka + caaryada tuubbada + taangiga qalabka kala-baxa lagu buufiyo + buufinta haanta qaboojinta x 2sets + mashiinka saddex-diir diir ah + qashin-gooye aan lahayn + boodh.
Taangiga haanta hawo-qaadka faakuumku wuxuu qaataa laba qaab dhismeed: kala-hagaajinta faakiyuumka iyo qaybaha qaboojinta. Labada taangiyada faakiyuumka iyo taangiga lagu buufiyo labaduba waxay qaataan bir daxal 304 #. Nidaamka faakiyuumka ee ugu fiican wuxuu hubiyaa qiyaasta saxda ah ee tuubooyinka; ku buufinta qaboojinta waxay hagaajin doontaa waxtarka qaboojinta; Nidaamka xakamaynta heerkulka biyaha otomaatigga ah wuxuu mashiinka ka dhigaa mid caqli badan.
Mashiinka la soo raro ee xariiqan dhuumaha ayaa qaadan doona nooca siisay. Iyada oo leh lambarka mitirka, wuxuu tirin karaa dhererka dhuumaha inta lagu jiro wax soo saarka. Nidaamka goynta wuxuu korsadaa mashiinka-boodhka oo leh nidaamka xakamaynta PLC.
tusaale FGE63 FGE110 FGE-250 FGE315 FGE630 FGE800
dhexroor biibiile 20-63mm 20-110mm 75-250mm 110-315mm 315-630mm 500-800mm
Qaab-dhismeedka SJ65 SJ75 SJ90 SJ90 SJ120 SJ120 + SJ90
awoodda matoorka 37kw 55kw 90kw 160kw 280kw 280KW + 160KW
awoodda extrusion 100kg / saacaddii 150kg 220kg 400kg 700kg 1000kg
Hore: Mashiinka biibiile PPR
Xiga: 12-575mm6.5mm qaro weyn PE soo saarka biibiile PE
WPC xariijinta extrusion
Khadkan waxaa si weyn loogu isticmaalaa soo saarida noocyo kala duwan oo WPC ah, sida WPC decking profile, guddiga WPC, guddiga WPC.
Geedi socodka socodka qadkan yahay PP / PE / PVC + budada qoryaha + lagu daro - qasitaanka — sheyga sheyga - mataanaha fur fur - caaryada iyo kalibrator — miiska samaynta faakiyuumka - mashiinka jiidista-mashiinka-goynta mashiinka-sii-deynta.
Khadkan sheyga ee 'WPC' wuxuu soo saaraa mashiinka mataanaha ee loo yaqaan 'conic twru extruder', kaas oo leh nidaam degassing ah si loo hubiyo in sifeynta wax aad u fiican. Caaryada iyo qalab-sameeyaha ayaa koray qalab la gashado; Mashiinka soo-qaadista iyo mashiinka wax lagu gooyo ayaa loo qaabeyn karaa sidii cutub dhammaystiran ama mashiin gooni ah.
Khadkan waxaa inta badan loo isticmaalaa soo saarida tuubooyinka UPVC oo leh dhexroor waaweyn iyo dhumucda darbiga tuubbada kala duwan dhinacyada sida beeraha iyo tuubooyinka dhismaha, cable layietc. Dhexroorka ugu sarreeya ee dhuumaha wuxuu noqon karaa 1200mm.